ट्याटुहरूको बारेमा धर्मशास्त्रले के भन्छ? – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – अहिले को यो २१ औ शताब्दीमा ट्याटूहरू संसारका धेरै भागहरूमा पहिलेभन्दा बढी लोकप्रिय छन्। ट्याटू भएका व्यक्तिहरूको संख्या हालका वर्षहरूमा नाटकीय रूपमा बढेको छ। ट्याटू केवल बिरामी वा विद्रोहीहरूको लागि मात्र होईन। ऐतिहासिक रूपमा ट्याटूसँग सम्बन्धित विद्रोहको धार दिनानु दिन बृदीहुन थालेकोछ ।
नयाँ नियमले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले ट्याटू खोप्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही बताउँदैन। त्यसकारण, हामी भन्न सक्दिनौं कि ट्याटु बनाउनु पाप हो। पवित्र धर्मशास्त्रको मौनताको कारण हरेक विश्वासीहरूले यस कुरामा उनीहरूको आफ्नै विश्वासको अनुसरण गर्दछ।
यहाँ केही सामान्य बाइबलीय सिद्धान्तहरू छन् जुन ट्याटु बनाउदा लागू हुन सक्छ:
बच्चाहरूले आफ्ना माता-पिताको आदर र आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ (एफिसी ६:१-२)। नाबालिगको लागि उसको आमा वा बुबाको इच्छा उल्लघनमा ट्याटू बनाउदा बाइबल यस कुरामा असमर्थ जनाउदछ। विद्रोहबाट खोपेको ट्याटूहरू पाप हो।
बाहिरी सजावट “भित्री आत्मा” को विकास जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छैन र त्यो एक इसाईको केन्द्रविन्दु हुनुहुन्न (१ पत्रुस ३:३–४)। एक व्यक्ति जो अरु मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गर्न वा प्रशंसा बटुल्न ट्याटू बनाउदछ त्यो आफैमा बेकार, र पाप पूर्ण क्रियाकलाप हो किनकि त्यो अरुको ध्यान केन्द्रित गर्नमा बनेको हुन्छ।
परमेश्वोरले हृदय देख्नुहुन्छ र जान्नुहुदछ, हामीले गर्ने कुनै पनि कुराको लागि हाम्रो उत्प्रेरणाले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ (१ कोरिन्थी १०:३१)। ट्याटू प्राप्त गर्ने प्रेरणा कस्तो छ र के बाट सो हुन् आयो के यसले परमेश्वरको महिमाको काम हुन्छ। ट्याटू आफैंमा पाप नै नहुन सक्छ, तर यसलाई प्राप्त गर्ने प्रेरणा हो।
हाम्रो शरीर, र हाम्रो प्राण, उद्धार गरिएको छ र यो परमेश्वरकै हो। विश्वासीको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो (१ कोरिन्थी ६:१९-२०)। त्यो मन्दिरको कति परिमार्जन उचित छ? के त्यहाँ रेखा छ जुन क्रस गर्नु हुँदैन? के त्यहाँ कुनै विन्दु छ जहाँ एक शरीरमा ट्याटूको विस्तार कला हुन आवश्यक छैन र जुन कुरा पाप अनि विकृति हुन थाल्छ?
हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं, हामि संसारमा परमेश्वरको सन्देश पठाउँदैछौ (२ कोरिन्थी ५:२०)। ट्याटुले के सन्देश पठाउँदछ, र यसले के सहायता गर्दछ ? के ट्याटुले ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व गर्नुको साथै सुसमाचार प्रचार गर्न सहायता गर्छ कि बञ्चित ?
विश्वासबाट जे पनि आउँदैन त्यो पाप हो (रोमी १४:२३), त्यसकारण ट्याटू खोप्ने व्यक्ति पूरै विश्वस्त हुनुपर्छ कि यो उसको इच्छा हो, वा उनको लागि परमेश्वरको इच्छा हो।
हामी ट्याटूहरूको छलफललाई पुरानो नियमको नियममा हेर्नु सक्दछौं जसले ट्याटूलाई निषेध गर्दछ: “मरेका मानिसका निम्‍ति आफ्‍नो शरीरमा काटेर चोट नबनाउनू। अनि आफ्‍नो शरीरमा कुनै किसिमको छाप नबनाउनू। म परमप्रभु हुँ “(लेवी १९:२८)। यस खण्डमा ट्याटुहरूको निषेधको कारण बताइएको छैन, तर यस्तो लाग्न सक्छ कि टाटु बनाउनु मूर्तिपूजा र अन्धविश्वासको साथ जोडिएको एक मूर्तिपूजक अभ्यास हो। मूर्तिपूजकहरूले आफ्नो छालालाई झूटा देवताको नाममा वा कुनै मूर्तिलाई सम्मान गरेको प्रतीकको साथ चिह्न लगाउन सामान्य कुरा थियो। परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरू फरक भएको माग गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई उही पदमा सम्झाउनुभयो, “म परमप्रभु हुँ।” इस्राएलीहरू उहाँकै हुन्; तिनीहरू उहाँको कारीगरी थिए, र उनीहरूको शरीरमा झूटा देवताको नाम खोपिनु हुँदैन। जबकि नयाँ नियमका विश्वासीहरू मोशालाई दिइएको कानूनको अधीनमा छैनन्, हामी यो आदेशबाट यो सिद्धान्त लिन सक्दछौं कि यदि कुनै इसाईले टाटु बनाउने निर्णय गर्दछ भने त्यो कहिल्यै अन्धविश्वासको कारण वा सांसारिक दर्शनलाई बढावा दिनु हुँदैन। त्यसैले ट्याटु खोप्नु पाप हो वा होइन यो कुरा माथि तपाइले पढिसके पछि थाहा पाईसक्नु भयो अब कुरा गरु तपाईको परमेश्वोरप्रति को प्रेम र उहाँ प्रतिको विश्वासको जरा कहाँ सम्म गडेको छ यस कुराले तपाईलाई सहि निर्णय गर्न सहायता गर्नेछ।
उठ्नुहोस् र बनाउनुहोस् ।